ဘယ်နေရာမှာမဆို Randstad ကုမ္ပဏီသှနျသငျ
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်ကြသူလူများအများစုမှာ။ ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီကနေခရီးသွားလာဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းအကြားခရီးသွားလာအလွန်လွယ်ကူပြီးအလွန်တတ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိအလုပ်ရှာဖွေနေသစ်ကိုပြည်တော်ပြန်များအတွက်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, သင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကြောင့်, အင်တာဗျူးအဘို့အခရီးသွားလာ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်ကနေဖုန်းခေါ်ရပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်သည်ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီကနေခရီးသွားလာရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တော်တော်များများရှိပါတယ် အသစ်သောလုပ်သားများနှင့်ယူအေအီးဧည့်သည်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ သငျသညျသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့နည်းလမ်းများစွာထဲကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်တွင်, သငျသညျကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်သမျှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမုဒ်။ သင့်ရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပိုမိုအဆင်ပြေဖြစ်သင့်သည်။ လူတိုင်း အဘူဒါဘီကနေဒူဘိုင်းမှယူအေအီးကိုချစ်။ တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဤခေါင်းစဉ်မှနည်းနည်းချဲ့ထွင်ဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ထံမှသွားလာနိုင်ပါတယ် ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီ နည်းလမ်းများစွာပါပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောရဟတ်ယာဉ်သို့မဟုတ်ရွက်လှေအဖြစ်အခြေခံစျေးပေါဘတ်စ်ကား, တက္ကစီနှင့်ဇိမ်ခံခရီးသွားလာခြင်းမှ။ တစ်ဦးအဖြစ် ပြည်ပရှိသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအသုံးပြုသူ။ ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီနှင့်အတူနယ်လှည့်အဖြစ်ကြွလာသောသူအပေါင်းတို့သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါးပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။ တဖန်သင်တို့အကြောင်းအရာကိုသိပါလိမ့်မယ် အမ်းမရိတ်အတွက်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်.
သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည်အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီကနေခရီးသွားလာ ဘတ်စ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘတ်စ်ကားဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အယ်လ် Ghubaiba ဘတ်စ်ကားဘူတာကနေများသောအားဖြင့်တိုင်း 20 မိနစ်ထွက်ခွာ။
ဘတ်စ်ကားဖမ်းရန်အကောင်းဆုံးနေရာအယ်လ် Ghubaiba မီထရိုဘူတာရုံဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ဤအရပ်ဌာနကိုဖွင့်စုံတွဲတစ်တွဲလုပ်ကွက်ဖြစ်ပါသည် ပျောက်အများပြည်သူနေရာတွေကနေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကမှရောက်လာရန်ဖြစ်နိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် အဆိုပါက Metro ကိုသုံးနိုင်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ, ဘတ်စ်ကားစူပါဇိမ်ခံဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာ, ဘတ်စ်ကားအများစုလေအေးပေးစက်နှင့်အနီးသို့အလင်း mode ကိုအတူပါလာ။ အပြုသဘောဘက်တွင်, စျေးနှုန်း 25 DHS ဖြစ်ပြီးဒူဘိုင်း 15 DHS ကနေပြန်သွားပါ။ ဒါကြောင့်တရားမျှတသောဖြစ်ပါသည် ခရီးသွားများအတွက်လုံလောက်အောင်.
အဆိုပါဘတ်စ်ကားဘူတာနှင့်ဘတ်စ်ကားသူတို့ကိုယ်သူတို့။ ယင်းနှင့် တွဲဖက်. operated နေကြတယ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီပို့ဆောင်ရေးအခွင့်အာဏာ.
ထိုကဲ့သို့သောဘတ်စ်ကားအဖြစ်မြေတပြင်လုံးခရီးသွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ Are အဘူဒါဘီကုမ္ပဏီပိုင်။ ထိုသူတို့က 15 DHS လမ်းတိုင်းအားသွင်းနေကြသည်။ ကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်, ပထမဦးဆုံးဘတ်စ်ကားဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်6pm မှာပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်း 11 မှာထွက်ခွာ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျအမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာစီစဉ်ရန်လိုအပ်။ ကျနော်တို့အဘူဒါဘီကနေဒူဘိုင်းသွားဖို့ပါ။ အဆိုပါဘတ်စ်ကား Hazza ဘင် Zayed ၏ထောင့်ပထမ (11th) စိန့်နှင့်အရှေ့ (4 ပေါ်မှာတည်ရှိ terminal မှထွက်သွားth) ။ နှင့် ဤအရပျကအားလုံးကိုမျိုးစုံကနေလက်လှမ်းဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအခြို့သောမုန်သို့မဟုတ်တစ်သားညှပ်ပေါင်မုရနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပင်အချို့စာအုပ်များကိုဖတ်ပါ ယူအေအီးအတွက် MBA ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင်ရဖို့.
အဆိုပါဘတ်စ်ကားပုံမှန်အားဖြင့်သင်မောင်းသူကိုဆက်သွယ်မှမလိုအပ်ပါဘူးရပ်တန့်စေသည်။ သငျသညျဒူဘိုင်းကနေဦးတည်နေတယ်ဆိုရင်။ အဆိုပါဘတ်စ်ကားနီးစပ်သူကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ် yas ကျွန်း ဒူဘိုင်းကနေအဘူဒါဘီမှ၎င်း၏လမ်းပေါ်မှာ။ ဒါဟာသင်အလွန်အရေးကြီးပါသည် စိတျထဲမှာထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကရှေ့ထိုင်ခုံအမြဲအမျိုးသမီးများနှင့်မိသားစုများအတွက် reserved နေကြတယ်, နှင့်လည်း buss ၏နောက်ကျောအပေါ်ထိုင်ခုံမှသာယောက်ျားဘို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒါကယူအေအီးအတွက်စည်းကမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ရဲ့သင်ရုံဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိလာသူတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ဟုပြောကြပါစို့။ ထိုအခါအချိန် 11 ညနေများနှင့်6နံနက်အကြားဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ဖော်ပြသကဲ့သို့သင်တို့တစ်ဦးဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်မည်သည့်မက်ထရိုဘူတာကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်။ သင်တို့အဘို့ကိုသာရရှိနိုင် option ကိုကတက္ကစီဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲကြိုးစားနိုင်သည် ကားငှားသို့မဟုတ်တစ်ခု Uber ကားမောင်းသူဖြစ်လာ.
တစ်ဦးကအငှားအဲဒီအခြိနျမှာ nicest မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမွနျမွနျဘူဒါဘီဖို့လေဆိပ်ကနေရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ 300 DHS န်းကျင်တစ်ဦးချင်းစီနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်ပါတယ် တစ်မိသားစုများအတွက်သွားလာရန်အလွန်လုံခြုံနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် သငျသညျသငျနှငျ့အတူကလေးတွေရှိခြင်းလျှင်။ သူတို့ကဘတ်စ်ကား operating စတင်ရန်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေန်းကျင်6နာရီမဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့အဘူဒါဘီ မှစ. ဒူဘိုင်းကတစ်ဦးတက္ကစီယူကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်၏။
အခမဲ့ Etihad နည်းပြအတွက်အလုပ်အတွက်ခရီးသွား
ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့နယူးလုပ်သားများ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းမှ Etihad အတွက်ခရီးသွားလာ။ နှင့်ဤလေကြောင်းလိုင်း၏အားသာချက်ခရီးသည်အကြီးခံစားစီးပွားရေးလူတန်းစားအတွက် Etihad နှင့်အတူပျံသန်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့ကအခမဲ့နည်းပြ၏အားသာချက်ယူနိုငျသောကွောငျ့ အဘူဒါဘီလေဆိပ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှု။ စိတ်ထဲ၌ဤကုမ္ပဏီအဘူဒါဘီဖို့နဲ့ကနေခရီးသွားလာအခမဲ့ဘတ်စ်ကားကမ်းလှမ်းကြောင်းထားပါ။ သင်သည်သူတို့၏ကုမ္ပဏီသုံးပါနှင့်သင်ခိုင်လုံသောလက်မှတ်ရှိမှသာလြှငျ။
တစ်ခုတည်း ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအနှုတ်လက္ခဏာ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမတိုင်မီ 24 နာရီအမှုကိုပြုခံရဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါခရီးစဉ်သတိပြုမိခြင်းနှင့်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်ယင်း Etihad က်ဘ်ဆိုက်အတွင်းဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့ရဲ့ရုံးခန်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ရပါမည်။ အမြဲတမ်းသေချာအောင် သငျသညျနည်းမှန်လမ်းမှန်သွားလိမ့်မည်။ သငျသညျနာရီစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်အိုးအိမ်မဲ့နေချင်ကြပါဘူးလို့ပဲ။ သို့မဟုတ်ပင်နောက်ကျောနှင့်ပျံသန်း မွန်ဘိုင်းများတွင်အလုပ်အကိုင်အဘို့အရှာဖွေရေး.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဤအမျိုးအစားအထွေထွေလူထုများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်တတ်နိုင်သည်။ ဆိုတာသတိရပါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ကောင်းစွာအလွန်စျေးပေါဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်anice တာဘိုအားကစား HMV သုံးပြီးအဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျလိမ့်မည်ကတည်းက ယူအေအီးအတွက်ကားဖြင့်ခရီးသွားလာ။ သငျသညျအခမဲ့ယာဉ်ရပ်နားနီးပါးရှိကွောငျးကိုသိရန်လိုအပ် အမ်းမရိတ်အတွက်ဘယ်နေရာမှာမဆို။ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းလုံးဝကြီးမားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအခမဲ့ယာဉ်ရပ်နားသည့်အများစုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် ဟိုတယ်များ နှင့် စျေးဝယ် စင်တာများ။ အထူးသဖြင့် Sharjah, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်။ သင်သိရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်တွင်အများအပြားအပိုစွဲချက်ရှိပါတယ်။ သင်ဓာတ်ဆီဘူတာရုံကိုသွားမတိုင်မီဒါကြောင့်အကြောင်းကိုမေးကြည့်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့ ကမ်း ကဒ်ကိုအလိုအလျောက်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်.
အမြဲရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီ၌ကောင်းသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီး။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုရဲအလွတ်များမှာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ။ သင်ယူအေအီးအတွက်ကားတစ်စီးပိုင်ဆိုင်နေချိန်မှာကြောင့်လိုအပ်သောကြောင်းသတိရဖို့ကြိုးစားပါ။ သို့မဟုတ်သင်ရုံခရီးသွားဧည့်အဖြစ်ကိုမောင်းဖို့ကားငှား။ သငျသညျသငျနှငျ့အတူသငျနှငျ့အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ကထုတ်ပေးပုံမှန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင့်လက်၌ သငျသညျအချို့ရှိ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်အလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ.
ဤနည်းဥပဒေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဖြင့်ပြဌာန်းနေသည် အတွေ့အကြုံနှင့်ဒူဘိုင်းအသစ်ပြည်တော်ပြန်။ ဒါဟာအဘူဒါဘီမှာထက်ဒူဘိုင်းအတွက်ကားတစ်စီးငှားဖို့အများကြီးပိုလွယ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါကတစ်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ဧရိယာကြောင့်။ ဒါပေမယ့်နှစ်ခုတစ်ကားကိုရရှိရန်လည်းကောင်းလမ်းအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်မဟုတ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ လေဆိပ်။
သင်တစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိခြင်းပါဘူးနေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာအဘယ်သူမျှမကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘို့ ကမ္ဘာ့အတန်းအစားအများပြည်သူရှိခြင်းကြောင့်ကိုးကား အရပျ၌သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်။ ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီကနေခရီးသွားလာအကြောင်းအထငျမှားနေထိုင်သောလူများအများစုမှာ။ သငျသညျညဉ့်အချိန်ပေါ်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအကြားသွားလာလိုလျှင်။ သင်တစ်ဦးကားထဲတွင်ရကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ရှိကိုမောင်းမရကြပါလျှင်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
သို့သော်ငြားလည်း, က 2018 နှင့် 21ts ရာစုဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ရဲ့ပြဿနာကိုစစ်မှန်တဲ့ခဲ့ကြပေမည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်း အစိုးရသည်ဤကိစ္စတွင်ပေါ်မထိဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ဒူဘိုင်းရဲ့လမ်းမကြီး & ပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် Extreme ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေစတင်ပါ။ လည်းပဲ အတော်ကြာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ ဒါကြောင့်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စတင်ပါ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာရှိ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ဖူး ယူအေအီးလမ်းကြောင်းအတွက်ခရီးသွား။ အသစ်တစ်ခုကို update ကိုတက်လာရှိပါသည်။
ရှိသည် အလုပ်အတွက်ခရီးသွားနေသောသစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများတွေအများကြီး။ အထူးသဖြင့်အဘူဒါဘီကနေဒူဘိုင်းရန်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ထဲကအချို့အချို့သောပိုက်ဆံချွေတာ။ ထိုသူတို့ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသွား Dhs200 ၏အထက်သို့တစ်ဦးအငှားယာဉ်စီးခအဘို့အလမ်းတိုင်းကိုပေးဆောင်နေကြသည် !. ဒါပေမယ့်သာမန်လမ်း သူတို့ခရီးသွားမှအတော်လေးပျော်ရွှင်နေကြသည် စံနည်းလမ်းအလုပ်လုပ်ရန်။ ခရီးသွားလာအရှိဆုံးပညာရှိလမ်း တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပျအတှကျ အများပြည်သူဘတ်စ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမှအချိန်အပိုင်းအခြားအဘူဒါဘီခရီးသွားခြင်း? နှစ်နာရီမှ One နဲ့တစ်နှစ်ခွဲ။ အားလုံးအချိန်နှင့်အသွားအလာအပေါ်မူတည် ယူအေအီးအတွက်.
ဒါဟာဘယ်လောက်မ ယူအေအီးမှသွားလာရန်ကုန်ကျစရိတ်?. အဆိုပါလက်မှတ်များတစ်လမ်းအပေါ် Dhs25 ဖြစ်ကြသည်။ နှင့်လည်းငွေပမာဏဟာ standard ငျ RTA nol ကဒ် အသုံးပြု. များအတွက်ပေးဆောင်စေနိုင်သည်။
ဘယ်လောက်လဲ ကျွမ်းကျင်သူများဖြုန်းဖို့လိုအပ်သလော. ဘတ်စ်ကားနဲ့ခရီးသွားအများဆုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဝေး ဈေးအပေါဆုံးလမ်းကြောင်း အလုပ်ရရန် ဒူဘိုင်းကနေအဘူဒါဘီရန်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျလုံးဝအသစ်အလျှင်နှင့်သင်မောင်းထုတ်ရန်ပဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိကြပါဘူး။ ထိုအရာပေါ် မူတည်. options နှစ်ခုရှိပါတယ် ဒူဘိုင်း၏ဧရိယာသင်လက်ရှိနေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ.
အိုကေ, သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည်ပြီးခဲ့သည့်ခရီးသွားဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီကနေရဟတ်ယာဉ်ပျံနေသည်။ ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ် ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးဇိမ်ခံနည်းလမ်းများ။ ငါတို့သည်လူအပေါင်းတို့သည်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီကိုသိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကြွယ်ဝသောလူများကသိကြကောင်းကောင်း, နေပါတယ်စကားပြောနှင့် ထိုကဲ့သို့သော 7-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်အဖြစ်စျေးကြီးသောနေရာများ နှင့်အားကစားကားများနှင့်ဇိမ်ခံ Villas ၏ကြီးမားသောပမာဏ။
ဤသည်ခရီးသွားအများစုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကလူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ၏အချို့ အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန် ခရီးသွားလာရဟတ်ယာဉ်များအသုံးပြုနေသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်ကြသည် ဥပမာအားဖြင့်တကယ်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များရှိခြင်း, ဒူဘိုင်းတစ်ဦး CEO ဖြစ်သူသို့မဟုတ် CFO အနေအထား.
အချိန်ခရီးသွားခြင်း? ရာသီဥတုအခြေအနေများပေါ် မူတည်. 35-55 မိနစ်။
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ ဇိမ်ခံဖြစ်သလော တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကရဟတ်ယာဉ်ငှားမည်သူမဆိုအဘို့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်တစ်ဦးပဋိညာဉ်စာတမ်း 14,900 -2 လူတို့အဘို့ Dhs5 န်းကျင်မှာစတင်ပါသည်
အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကလိုဦးမှာလဲ လူများတို့သည်အချို့သည် ပိုက်ဆံမယ့်စက္ကူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကရဟတ်ယာဉ်ငှားရန်မအရာဝတ္ထုရှိခြင်းနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နိုင်ငံရေးသမားမြို့တော်ရောက်ရှိစေလိုသည်။ သူတို့လာရောက်လည်ပတ်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင် ဒူဘိုင်း၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။ သူတို့ကလူတန်းစားတစ်ရပ်သင့်လျော်သောအဆင့်ကိုရှိသင့်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, အဖြေရဟတ်ယာဉ်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအများစုဖြစ်ဖွယ်ရှိတဲ့သဘောတူညီချက်နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ရမည်။
ဤမျှလောက်များစွာသောပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်ကုမ္ပဏီများနှင့်အားကစားကားများ။ ဥပမာအားဖြင့်, Fly ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းဟိုတယ်ချုပ်လုပ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်။ ထိုသူတို့က client အားလုံးတိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးပါပြီ။
တချို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီမှခရီးသွားလာ။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီမြို့အနီးတည်ရှိသောသူတို့ရဲ့ helipad ကနေရွေး-Up နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအလုပျအတှကျတစ်ဦးအဘူဒါဘီကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ။ သငျသညျကျိန်းသေသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးအဖြစ် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အလုပ်အမှုဆောင်သငျသညျဇိမ်ခံစတိုင်ခရီးသွားလာပါလိမ့်မည်။
သငျသညျကျိန်းသေလိမ့်မည် တစ်ထိုအခါတစ်ဦးပွဲတော် City နှင့်စီးတီးစင်တာသို့သွားရောက်t ကို။ ထို့အပြင်, သင့်ကားမောင်းသူ drop-ချွတ်ပါလိမ့်မယ်သင်သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုအဘူဒါဘီအတွက်စော်ဘွားနန်းတော်မှာ။ ဒါကြောင့်အားလုံးကြောင်း ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီကနေဇိမ်ခံခရီးသွားလာအဖြစ်လာ။ အဆိုပါဇိမ်ခံခရီးသွားလာလည်းထိုကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်နှင့်အတူ featured ရဟတ်ယာဉ်များအဖြစ်အခြားရွေးချယ်စရာလည်းပါဝင်သည် ဝန်ထမ်းများ။ အဆိုပါတိတ်ဆိတ်, လေအေးပေးစက် Cabin VIP အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုရန်သင့်အားရလိမ့်မည်ဟုလက်ချုပ်သားရေအတွင်းပိုင်းအတူပါလာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစား၌သင်တို့၏ဦးတည်ရာ.
ဒူဘိုင်း UberCHOPPER ခရီးသွား
သင်ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြင့်တက်နှင့်စီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်သိကြသည့်အတိုင်း အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့။ အဘူဒါဘီမှသွားလာရန်ဥပမာတစ်ခုမှာ။ သင်ကိုယ်တိုင်တစ်ရဟတ်ယာဉ်ရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ Uber ကနေ။ လူတစ်ဦးနှုန်း Dhs600 ၏ဖြစ်နိုင်သောအောက်ပိုင်းစျေးနှုန်းမှာကြည့် UberChopper website က။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအထူးသဖြင့်သစ်ကိုအဘူဒါဘီအသုံးပြုသူများအတွက်အပေါ်ထားတော်မူ၏။ ဒါကနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီကနေခရီးသွားလာ။ သငျသညျ, ဥပမာ, ဘယ်မှာ Atlantis အဆိုပါအုန်း Helipad ထံမှ ထွက်. နိုင်ပါတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးခိုင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ရှိအမြို့စင်တာများဟိုတယ်များ၏တဦးတည်းမှာအဆုံးသတ်။ ဒါဟာ တကယ့်တည်ရှိအတုအသေးစိတ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်က Uber က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူတို့နှင့်အတူကအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးရဟတ်ယာဉ်ရနိုင်နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိကျော်ပျံသန်း.
ယူအေအီးအတွက်အကျော်ကြားဆုံးနယ်လှည့်ရွက်လှေဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤသာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိလူများတစ်ဦးအလွန်သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းအဘို့ဖြစ်၏။ ဥပမာ ကူဝိတ်အတွက်အိန္ဒိယလူမျိုး။ အချိန်ဖို့အချိန်ကနေဤသို့ပြုကြဖို့လုံလောက်တဲ့ငွေရှာ။
တစ်ရွက်လှေပေါ်တွင်ခရီးသွားအချိန်? နာရီ၏တစ်ဝက်, ဒါမှမဟုတ်လေးဆယ်ငါးမိနစ်အများဆုံးသာ။ အဆိုပါစော်ဘွားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပဲအံ့သြဖွယ်ရာအရပျသငျသညျပိုက်ဆံရှိခြင်းလျှင်။ သို့သော်ငြားလည်း, သင်ယူအေအီး၌ကြွယ်ဝရနိုင်.
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?။ ၎င်း၏အပေါငျးတို့သရွက်လှေ၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ ရှိသည်ဖို့လမ်းမရှိ စီးပွားရေးလူတန်းစားလက်မှတ် ရွက်လှေ Chartered ဘဏ်ဟာကုမ္ပဏီများနှင့်။ အဆိုပါစျေးနှုန်းများတကယ်ရွက်လှေ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းနှင့် သင်နှင့်အတူမည်မျှလူဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ သငျသညျစျေးကွက်သိလျှင်ထိုသို့စျေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။
မည်သို့ကရွက်လှေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါသလဲ သငျသညျရှိပါက တစ်ခုခုကိုဥရောပကြိုတင်ဘွတ်ကင်လေယာဉ် သို့မဟုတ်ဥပမာစော်ဘွားသို့မဟုတ် Etihad များအတွက်အာရှ။ ထိုအခါစမတ်လမ်းအတွက် သငျသညျပုဂ္ဂလိကလေဆိပ်ဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးမောင်းသူရနိုင်ပြီးတော့သူပြီးတော့ဆိပ်ကမ်းရန်သင့်အားယူပါလိမ့်မယ်။ ထိုအရပ်၌ထံမှသင်တစ်ဦးရွက်လှေကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင်ကြိုတင်ရွက်လှေများစာအုပ်ဆိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ သငျသညျအံ့အားသင့်ပေမယ့်ရှိပါတယ်စေခြင်းငှါ ယူအေအီးအတွက်တန်းစီအတွက်အများအပြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလူ။ ထိုလူများနှင့်သူတို့မှာလည်းလေဆိပ်မှာသင်နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုသူတို့ပြီးသားကကြိုတင်ဘွတ်ကင်နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သေချာသင်အလုံအလောက်ကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းစာအုပ်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ပါစေ။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီခုနှစ်တွင်ပင်သီးသန့် booking ရွက်လှေများအလုပ်များစျေးကွက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ အနာဂတျမှာဒူဘိုင်းအစိုးရ ဒူဘိုင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအောက်မှာ Hyperloop နှင့်ယာဉ်ရပ်နားတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ နဲ့တခြားစီမံကိန်းတွေသူတို့လိုကျပါမညျဆိုပါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မဟာဗျူဟာ။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၏အနာဂတ်စီမံကိန်းအတွက် ရာခိုင်နှုန်း 44 အားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စဖြတ်ကူညီပေးပါမည်။ ထိုအချိန် မှစ. သူတို့အထိ AED 900 သန်းတစ်နှစ်၏ငွေစုအတွက်ရရှိလာတဲ့ကစီမံခန့်ခွဲမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်ငွေဒီလိုမျိုးအတူ သူတို့လုပ်ကိုင်ဖို့နေရာသစ်ညျဆောကျမညျ.
ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီကနေအလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ခရီးသွားခြင်း ?. ဟုအဆိုပါအစိုးရ related source ကို က 15 မိနစ်အောက်မှာခန့်မှန်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်!။ ဒါကြောင့်သူတို့ကယခုထက်ပိုမိုတိုတောင်းတဲ့လမ်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ သင်တန်း၏, ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မည် လက်ရှိဧည့်သည်များနှင့်အသစ်ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ကောင်းသော။ ယူအေအီး2မိနစ်နီးပါး 15 နာရီကနေအချိန်ဘောင်ဖြတ်အထူးသဖြင့်ပါ။ ဒူဘိုင်းမှအဘူဒါဘီကနေခရီးသွားလာသည်။
ဘယ်လောက်ကုန်ကျမည်သနည်း? အဆိုပါ Hyperloop အစိုးရကလူဆို။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကြောင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း၏လက်ရှိကုန်ကျစရိတ်ထက်လမ်းစျေးသက်သက်သာသာဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမနိုင် ဒါကြောင့်ဂုဏ်နဖြစ်ပျက်မည်သည့်အခါစောင့်ဆိုင်း။ သငျသညျမှာကွညျ့ရှိသည်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်နေတယ်ဆိုရင် အနာဂတ်စီမံကိန်းများကို သငျသညျကျိန်းသေအောက်ကအာရေဗျစီးပွားရေးက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့်အတူ, ယူအေအီးဖွင့်လှစ်သစ်ကိုလုံခြုံရေးရာထူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်.
ဒီတော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲ အလုပ်ကနေအသကျရှငျနှင့်ခရီးသွားရာ?။ ကြောင်းမရှိအဖြေကအားလုံးကိုသငျသညျအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအပေါ်မူတည်လျက်ရှိ၏။ ထိုအငွေဘယ်လောက်သင်လက်ရှိလုပ်နေပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများမှာ အဘယ်သူသည်သင့်အားလုံးကိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းလမ်းကို။ ကျနော်တို့တချို့စံနည်းလမ်းများနှင့်ဖန်စီနည်းလမ်းအချို့ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီ။ သငျသညျချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင် ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ် သို့မဟုတ်အဘူဒါဘီကနေဒူဘိုင်းရန်။
အချို့သောအပြုသဘောနှစ်ဖက်နဲ့အနှုတ်နှစ်ဖက်ယူအေအီးအတွက်ရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်ခရီးသွား အဘူဒါဘီအကြားဒူဘိုင်းမှ ok ဖြစ်သင့်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုခြင်းယောက်ျားတွေကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အပြုသဘောနေဖို့နဲ့ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီကိုချစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အမြဲသောကွောငျ့ ကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေမျှော်လင့်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသငျသညျယခုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရနိုင် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ.